UXiaomi wazisa iswitshi sokufihla iintengiso kwi-MIUI | I-Androidsis
Iintengiso kwi-MIUI yinto evelisa amagqabantshintshi amaninzi. Nangona kwiinyanga nje ezidlulileyo kuye kwakho izikhalazo ezininzi kubo, ke uphawu lwaseTshayina ibhengeze ukuba bazakuthatha amanyathelo. UXiaomi uthe bazakuthatha amanyathelo ngalo mbandela kwaye banako, kuba kuye kwaziswa umsebenzi oza kunika abasebenzisi amandla amaninzi ngakumbi ngefowuni evela kuhlobo lwentengiso.
Kwathiwa uXiaomi uya ngenisa ukhetho ngaphakathi kuseto kwi-MIUI, ukuze abasebenzisi babe nakho ukukhubaza iintengiso kulungelelwaniso lomntu. Kubonakala ngathi yile nto yenziwe luhlobo lwaseTshayina, njengoko sele kubonisiwe.
IXiaomi ngoku idibanisa utshintsho, eya kuthi ivumele ukuba zisuse iintengiso kwi-MIUI. Ke ukuba umsebenzisi akafuni ukubona iintengiso, kuba zibonakala ngathi ziyacaphukisa, baya kuba nakho ukwenza ngokulula ngolu khetho. Le yinto esele ibonwe kwi-beta ye-MIUI entsha e-China.
Nangona abasebenzisi eYurophu bengazukufikelela ngalo mzuzu, kuba uphawu wayeka ukukhulula wathi iibhetas kweli hlobo, njengoko besesitshilo. Ke ayizukude ide ifike kwinguqu elandelayo ezinzileyo xa ingonwatyelwa ngokusesikweni. Kuya kuthatha iiveki ezimbalwa.
Kubalulekile ukuba Xiaomi kwisisombululo kule ngxaki wentengiso kwi-MIUI. Abasebenzisi bebekhalaza ngalo mbandela iinyanga, ngenxa yoko kubalulekile ukuba inkampani ithathe amanyathelo ngalo mbandela ngesisombululo esinjengalesi, esinokuthi sonwabise wonke umntu.
Ke ngoko, ukuba usebenzisa ifowuni yeXiaomi, kuya kufuneka ube nokufikelela kwiiveki ezimbalwa kule nguqulo intsha ye-MIUI apho silufumana khona olu tshintsho lokuphelisa iintengiso. Ngelixa ezi ntengiso ziyingxaki eAsia, abasebenzisi baseYurophu abanangxaki koku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » UXiaomi wazisa utshintsho lokufihla iintengiso kwi-MIUI